Amabhasi we-EGO Azohlinzeka Ngezinsizakalo Zamahhala Kokuthi Izakhamizi Ezixoshwa EBan | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraAmabhasi e-EGO azohlinzeka ngenkonzo yamahhala kwizakhamizi ezikhululiwe ekuvinjelweni
22 / 05 / 2020 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, TURKEY
amabhasi e-ego azonikeza insizakalo yamahhala kwizakhamizi ezikhululiwe ekuvinjelweni
Umasipala we-Ankara Metropolitan uqede amalungiselelo we-Eid al-Fitr. Ngaphandle kwemigwaqo nama-boulevards eBaşkent, imisebenzi yokuhlanza yenziwa emathuneni, kanti amaqembu oMnyango Wamaphoyisa aqinisa ukuhlolwa kwabo kokudla ikakhulukazi izinkampani ezikhiqiza amaswidi. I-Crisis Desk, iBaşkent 153, ASKİ, i-Ankara Fire Brigade kanye namaqembu waMaphoyisa kaMasipala azosebenza ngesisekelo esingu-7/24 phakathi nomkhosi, kubandakanya usuku lwe-Arife. Izitolo zakwaHalk Ekmek Retail kanye neHalk Ekmek buffet zizovulwa kuphela phakathi kwe-23-3 ngoMeyi 26, ngoMgqibelo nango-10.00 Meyi. AmaSayensi namaqembu e-ASKİ azoqhubeka nengqalasizinda yawo kanye nomsebenzi we-superstructure. Amabhasi e-EGO, athwala izakhamizi zase-Ankara mahhala ngamaholide kazwelonke nangokwenkolo, nawo azosebenzela izakhamizi ezixoshwa ekhaya.
Umasipala we-Ankara Metropolitan uqede konke ukulungiselela kwawo kulo lonke idolobha ngaphambi komkhosi weRamadan, ozodlula ngaphansi komthunzi wesikhathi sokufika ekhaya ngenxa yokuqubuka kwesifo se-coronavirus kulo nyaka.
I-Başkent 153, i-Crisis Desk, i-EGO kanye ne-ASKI General Directorate, Amaphoyisa ama-Ankara noMnyango Wezemililo weMetropolitan bazosebenza u-7/24 ukufeza izidingo nezidingo zabahlali base-Ankara ngesikhathi samaholide.
Amabhasi we-Ego OKUVELA UMSEBENZI WAMAHHALA
Umqondisi Jikelele we-EGO, ozohlinzeka ngezinto zokuhamba zomphakathi phakathi kwamahora athile ngoMeyi 23, uzohlinzeka ngezinsizakalo zamabhasi wamahhala phakathi kukaMeyi 24-26, ngaphandle kwezinhlelo zesitimela, ngokuhambisana nesinqumo seBhodi Yesifundazwe Yezokuhlanzeka Yesifundazwe Yesifundazwe Sokulawula Kwe-Ankara:
- 24-26 Meyi 2020: 07.00-09.00 no-16.30-20.00
Ngesikhathi soMkhosi weRamadan, lapho kuthathwa khona isinqumo soMkhandlu kaMasipala waseMetropolitan wokuhlinzeka ngemisebenzi yokuhamba mahhala ngamaholide enkolo nawezwe lonke, izakhamizi zase-Ankara ezikhishwe ebanjelwa ekhaya zizokwazi ukuzuza emabhasini e-EGO mahhala ngezikhathi ezichaziwe.
IZIKHOLO ZE-OFISI ZIYAFUNA IZIBONELELO ZOKUDLA
Ukungezelela ukuhlolwa kokudla okujwayelekile okwenziwa yizakhamizi ukufinyelela ukudla okunempilo ngaphambi kweholide, Amaphoyisa ama-Ankara; Iyaqhubeka nokuhlolwa kwayo kwamabhizinisi akhiqiza futhi athengise imikhiqizo yebhikawozi nemikhiqizo emnandi.
Izinyathelo ezingokomthetho zithathwa ngenxa yokushoda okubonwa ekucwaningweni okubhekisisa ukuthi ngabe kuyahambisana nokulandela ezempilo, inhlanzeko, ipuleti yentela kanye nobhubhane lwe-coronavirus, ukuhambisana nokusetshenziswa komaski, amagilavu, imikhono, amathambo nezigqoko, ibanga lomphakathi, inani labasebenzi namakhasimende kuyahlolwa.
Ukugcizelela ukuthi uMnyango WezamaPhoyisa wase-Ankara uzobuye futhi ubheke ukuthi amabhizinisi namabhizinisi avaliwe yini ngezinsuku zokufika ekhaya, iNhloko yoMnyango Wamaphoyisa kaMasipala we-Metropolitan uMustafa Koç unikeze imininingwane elandelayo:
“Ngalezi zinsuku lapho silungiselela ukuhlangana ne-Eid al-Fitr ebusisekile nezizwe zakithi ze-Ankara ezimeni zokulwa nalolu bhubhane, amaqembu ethu, ahambahamba kulo lonke leli dolobha, ubusuku nemini, aqhubeke nokulawula kwawo. Kulesi sikhungo sinamaqembu aphendula ngokushesha kwizikhalazo ezifinyelele kulayini weBaşkent 153. ”
I-CEMETERY YOKUHLOLA UKUVELA
UMnyango wamathuna nawo ulungiselele ukuhlanzwa kwamathuna ngaphambi kweholide leRamadan futhi wawalungiselela ukuvakasha.
Ngaphezu kwazo zonke izifunda zedolobha KarşıyakaNgenkathi enza umsebenzi wokuhlanza oningiliziwe e-Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum naseSincan Cimşit Cemeteries, kwathathwa ukunakekelwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukubonakala kwamathuna okugcwala kakhulu ngaphambi komkhosi kuzosetshenziswa.
Ngaphakathi nendawo okwakugcinwa kuyo izihlahla ezisemathuneni, amagatsha esihlahla esomile athulwe, ukhula nalo. Ukuhlanza ngokucophelela kwenziwa emathuneni asemathuneni lapho izihlobo zazivunyelwe ukuhambela ngosuku lokuqala lomkhosi.
Esho ukuthi aqala amalungiselelo omkhosi ngenyanga edlule kuwo wonke amathuna, iNhloko yoMnyango wamathuna uKöksal Bozan uthe:
“Ngokuhambisana nemiyalelo yeMeya yethu uMnu. Mansur Yavas, akugcinanga amathuna amaphakathi kuphela kodwa nawo wonke amathuna ezifunda ahlanzwa. Umsebenzi wokuhlanza nokulungisa uqediwe emathuneni ethu ayi-6 maphakathi nesikhungo. Siqale ukwenza izilinganiso zomlilo emasangweni okungena ezakhamuzini zethu eza ukuzovakasha, siphinde futhi sihlinze imaskhi kulabo abangenawo umaskandi. Izihlobo zabafel 'ukholo zizokwazi ukuhambela ukholo ngosuku lokuqala lweholide zihambisane nombuthano woMnyango Wezangaphakathi. Amathuna ethu azovulelwa ukuvakasha kwezakhamizi zethu ezingenaso isikhathi sokufika ekhaya ngesikhathi sokufika ekhaya. ”
I-ANKARA Fire Brigade NECAPITAL 153 KANYE I-CRISIS TABLE IZOBENZA IPULA 7/24
IBaşkent, esebenza njengebhuloho lezokuxhumana phakathi kwenhloko-dolobha noMasipala Metropolitan, izosebenza isikhathi esingama-153/7 ukuxazulula izidingo zezakhamizi ngesikhathi esifushane.
Umugqa weCrisis Desk kanye nePsychological Support owasungulwa ngesikhathi senqubo yokubhebhetheka kwezifo zamakhorali uzoqhubeka nokusebenzela ukufeza izidingo zezakhamizi kulo lonke leli holide. Izakhamizi ze-Ankara zizokwazi ukuthumela izicelo zazo nezikhalazo kuMasipala weMetropolitan ngenombolo yocingo i-Crisis Desk ethi "0312 666 60 00" noma nge-Capital 153.
UMnyango Wezomlilo i-Ankara uzosebenza neziteshi ezingama-46/7 eziteshini ezingama-24 kanye nezifunda. Izakhamizi zaseBaşkent zizokwazi ukubika ngemibiko engaba khona ngomlilo ngesikhungo sezingcingo esiphuthumayo esingu-112.
IHANGER NOSAYENSI BENZA NGEMPELA
I-ASKI General Directorate izoqhubeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo kumaCapitals, 7/24, ngesikhathi samaholide.
Uma kunesidingo esiphuthumayo, izakhamizi zizokwazi ukufinyelela kwa-ASKİ ngesikhungo sezingcingo eziphuthumayo "0312 616 10 00" noma nge-Capital 153. Amaqembu e-ASKİ, azoqhubeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo zeselula amahora angama-24 ngosuku kuzinsiza Zokulungisa Nokulungisa Amakhadi weKhadi; Ukuhanjiswa kwamakhadi okuthenga izakhamizi ezikhubazekile, abasebenzi bezempilo nokuphepha, ikakhulukazi izakhamizi ezingaphezu kweminyaka engama-65, bazoya emakheli abo.
I-ASKI General Directorate isakhiwo senkonzo sizovulwa phakathi kwe-4-08.00 izinsuku ezi-17.00 zokubuyiselwa, ukuvuselelwa nokulayisha kwezinsizakalo zamakhadi kazibuthe wekhadi. Amaqembu futhi azoqhubeka nokugqekeza kwawo, umsebenzi wokulungisa nengqalasizinda ngaphandle kokuphazamiseka.
Njengengxenye yomzabalazo wokulwa ne-coronavirus, uMnyango Wezindaba Zesayensi, owonyusa amashifu asetshenziswa lapho kunqunyelwa ukusetshenziswa ngezimpelasonto, uzoqhubeka nokusebenza ngamaholide. Amathimba oMnyango Wezesayensi, azokwenza umsebenzi wokulungisa nokulungisa lesi sikhungo nazo zonke izifunda, azohlinzeka ngokubukeka kwesimanje kanye nokuphepha ukushayela emigwaqweni eyikhulu.
USUKU LOKUQALISA EKHIPHINI
Amaqembu omnyango weCity Aesthetics abuye asheshise umsebenzi wokuhlanza edolobheni ngaphambi komkhosi weRamadan.
Ngaphezu kwemigwaqo nama-boulevards e-Ankara, amaqembu enza imisebenzi yokuwasha ezitobhini zamabhasi, emabhentshini, emigwaqweni eseceleni, ezigcawini nasezithintelweni ezindaweni eziphakathi nendawo njenge-Ulus neKızılay alungiselela idolobha idili. Izimoto ezishisayo namaqembu eselula azoqhubeka nokusebenza ngo-7/24 ngomkhosi lapho kuzobekwa khona isikhathi sokufika ekhaya kwi-Ankara ekhazimulayo.
FOLK BREAD KANGANGOSUKU LOKUGCINA LESIhlanu NOSUKU
IMetropolitan Municipality Public Bread Factory, esephenduke uphawu enhlokodolobha, inqume uhlelo lokusebenzela uMkhosi weRamadan.
UHalk Ekmek, ozohlela izinsuku zomsebenzi namahora ukuhlangabezana nezidingo zokudla zezakhamizi futhi athwale imikhiqizo yabakhiqizi bendawo emashalofini ayo, wethule izinhlobo ze-baklava ne-dessert ezilungiselelwe lo mkhosi ukunambitheka kongxowankulu.
Izitolo zakwaHalk Ekmek Retail Stores kanye neHalk Ekmek buffet zizovulwa kuphela phakathi kwe-23-3 ngoMgqibelo, Meyi 26, uLwesibili kanye noMeyi 10.00, usuku lwesithathu lweholide.
Ngemuva kokuqala kokuhamba ngokubandakanyeka ngemuva kokuba izakhamizi ezineminyaka engama-65 nangaphezulu zinikezwe inkululeko yokubuyela ekhaya, zonke izinyathelo ezidingekayo zathathwa e-AŞTİ. Ngenkathi izakhamizi ezinezimvume zokuhamba zingathathwanga ziye ku-AŞTİ ngaphandle kwemaski, izindlela zokuphepha nazo ziyiswa ezingeni eliphakeme.
Amabhasi e-EGO azohlinzeka ngemisebenzi yamahhala futhi
Ama-EGO Amabhasi e-Ankara Amahhala
I-Ego Ibhasi Free
Ama-EGO Amabhasi Ayokhululeka Emkhosini
I-15 ku-Batman Wonke Amabhasi Azokhonza Ngamahala NgoJulayi
3. izimangalo zesikhumulo sezindiza zingabonwayo embikweni we-EIA
Inkantolo ayikwazi ukukhululwa e-Gulf Crossing Bridge EIA
Ingabe Izinjini Zizoxoshwa Kubuchwepheshe Bokuhlolwa?
Izitimela zizokhokhiswa eMthethweni Wokuthengwa Kwemphakathini kuze kufike ku-2023!
Ibhuloho lesithathu likhululiwe ku-VAT.
Abasebenzi abasebenza emkhakheni wezoLimo, iMfuyo kanye noMkhakha wokudla bazokhululwa kuCurfew
Amabhasi e-EGO ahlangene nomasipala
Ama-EGO Amabhasi akhutshaziwe
Amabhasi we-EGO akhethekile Wabaqeqeshi bezempilo abasebenza esibhedlela i-Ankara City
I-IMM Free Towing Service izakhamizi
Ukunakwa kwe-Ankara! Ekuseni amabhasi e-EGO ahlanganiswe kumasipala